Ho an’ny Tibetana tsy manana fanjakana mijoro sy miparitaka, safidy tsara ho an’ny mpifidy ny fitaovam-baovao anjotra · Global Voices teny Malagasy
Manandrana manentsina banga ho an'ny demaokrasia-vao-teraka ny 'SmartVote Tibet'
MpanoratraSonam Palmo Brunner
Voadika ny 18 Novambra 2021 4:57 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Ελληνικά, English, English
Pikantsary avy amin'ny fantsona lahatsary YouTube an'ny SmartVoteTibet mandrisika ny Tibetana monina any an-tsesitany handray anjara amin'ny fifidianana Tibetana ho avy.
Ho an'ny Tibetana, firenena mbola tsy manana fanjakana mijoro (ara-dalàna) sy miparitaka manerana izao tontolo izao, nefa efa manolo-tena amin'ny dingana demaokratika amin'ny fifidianana ireo solontenany, ny sehatra aterineto no hany toerana ahafahan'izy ireo manao safidy tsara alohan'ny handatsaham-bato.
Tombanana ho 6,5 tapitrisa ny olona Tibetana maneran-tany. Raha monina ao Tibet ny ankamaroany, misy ihany koa vondrom-piarahamonina an-tsesitany marobe any India, Nepal ary any amin'ny firenena tandrefana, avy amin'ny Tibetana izay nandositra ny tanindrazany taorian'ny fanjanahan'i Shina tamin'ny taona 1959. Raha fehezin'ny governemanta tsy voafidy any Tibet voabodo ny Tibetana, manana mpitarika voafidy isaky ny dimy taona kosa ny Fitantanana Foibe Tibetana any Dharamsala India. Na dia tsy misy fanjakana manaiky amin'ny fomba ofisialy aza ny governemanta Tibetana an-tsesitany, ho an'ny Tibetana, indrindra fa ireo monina any an-tsesitany, andry misolo tena ara-dalàna izany. Hatramin'ny nialan'i Dalai Lama, mpitarika ara-panahy sy ara-politika tamin'ny andraikiny amin'ny fitantanany ara-politika tamin'ny taona 2011, hanamarika ny fahafahan'ny Tibetana hifidy fanintelony ireo mpikambana ao amin'ny parlemantany sy ny filohany ny Aprily 2021.
Ahoana ny fampahafantarana ny mpifidy miparitaka manerana ny gilaoby?
Raha jerena ny zava-misy fa tena manerantany ny Tibetana ampielezana, ny fanamby lehibe dia ny fiatrehana izay nohasarotin'ny valan'aretina COVID-19.
Manao dingana roa ny fizotran'ny fifidianana Tibetana: fifidianana savaranonando nifidianana ireo kandidà voafantina ho ao amin'ny parlemanta, izay natao tamin'ny 4 Janoary 2021 izay nahitana ny fandraisana anjara mpifidy an-tsesintany 77 isanjato. Ireo manana vato be indrindra no afaka mirotsaka amin'ny fifidianana ankapobeny lehibe, izay hatao ny 11 Aprily 2021. Amin'io daty io, dia hifidy Filoha vaovao sy ireo mpikambana 45 ao amin'ny Parlemanta Tibetana any an-tsesitany ny mpifidy.
Mitaky fampitaovana goavana ho an'ny fandatsaha-bato ny fifidianana miampita sisitany toy izany, fa angamba ny tena zava-dehibe kokoa, amin'ny fanentanana, mba hahafahan'ny Tibetana mandray fanapahan-kevitra tsara amin'ny androm-pifidianana. Mba handresena izany fanamby izany, nisy ny vondrona Tibetana Soisa nanan-kevitra hamorona sehatra an-jotra azo antoka ahafahan'ny kandidà sy ny mpifidy hifampita hafatra mahomby.
Nanangana fampiharana smartvote Tibet ny vondrona rehefa nahazo aingam-panahy avy amin'ny tombon'ny Fampiharana Toro-hevitra momba ny fifidianana- Voting Advice Applications (VAA) sy ny fanohanan'ny fikambanana Soisa Politools izay namorona VAA antsoina hoe ‘Smartvote’ tamin'ny taona 2003 hanaovana fifidianana any Soisa. Tonga amin'ny fanaovana dingana roa ny tsirinkevitra fototra: voalohany, mamaly fanontaniana anjotra momba ny lohahevitra toy ny politikan'ny tontolo iainana na sosialy ireo kandidà, ary avy eo dia mamaly io fanontaniana io ny mpifidy, amin'ny farany dny fampifanandrifiana no mamaritra hoe iza no kandida izay toa mifanaraka indrindra amin'ny fijery ara-politika manokan'ilay mpifidy.
Amin'ny sehatra anjotra, tsy afaka miala amin'ny fanontaniana sarotra ny kandidà
Mety ho mahery vaika ny VAA satria tsy vitan'ny hoe misy fiantraikany tsara amin'ny haavon'ny fahalalana izy ireo, fa amin'ny taham-pahavitrihan'ny mpifidy ihany koa. Saingy angamba ny zava-dehibe kokoa, dia afaka manampy amin'ny fampifandanjana ny fifandraisan'ny fahefana eo amin'ireo kandidà tsy dia manan-katao sy ireo manan-katao ny sehatra toy izany.
Ny tena tanjon'ny smartvote Tibet dia ny hanohana tokoa ireo mpifidy mandritra ny dingana fandrafetana hevitra mba hahazoana ny sarin'ireo kandidà. Ampitaina amin’ny fomba mangarahara sy azo ampitahaina ny toerana ara-politikan’ireo kandidà mba tsy hampinoherana azy ireo fotsiny, fa mba ho tompon’andraikitra ihany koa any aoriana.
Namolavola fanontaniana feno ny ekipam-pitantanana ny sehatra mba hanangonana ireo hevitra ara-politika ho an'ny fiarahamonina zazavao amin'ny demaokrasia. Mba hampitomboana ny fimaroana, nasaina hanolotra fanontaniana maro amin'ny tetikasa ny fiarahamonina sivily Tibetana, ampian'ny vondrona mpanolo-tsaina iraisam-pirenena mba hitazonana ny fifandanjana sy ny tsy fitanilàna. Iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny rafitra ny tsy ahafahan'ny kandidà mandingana fanontaniana, ary tsy maintsy maneho ny heviny, ao anatin'izany ny lohahevitra mety ho saro-pady eo amin'ny fiarahamonina Tibetana, toy ny fanambadian'ny mitovy fananahana ohatra.
Araka ny asehoan'ity pikantsary ity amin'ny fampiharana eto ambany ity, afaka mahazo vaovao avy hatrany momba ny hevitry ny kandidà rehetra amin'ny fanontaniana lehibe sy manokana ireo mpifidy ho avy, ao anatin'izany ny maha-izy azy, na fiteny. Maneho ny valintenin'ny mpifidy amin'ny ho avy ny emoji mainty sy fotsy, raha loko volom-boasary kosa no maneho ny hevitry ny kandidà mirotsaka (mampiseho ny firindrana na fahasamihafana hita maso):
Lavitry ny fahalavorariana ny fanentanana anjotra
Saingy mbola fanamby ny fahazoana antoka fa afaka mampiasa ny sehatra am-pilaminana sy mahita ny lanjany ny kandidà sy ny mpifidy. Mipoitra tokoa ny olana isan-karazany, manomboka amin'ny tsy fahampian'ny fahaizana ny teknolojiam-baovao hatramin'ny tsy fahampian'ny fahatakarana ny hevitra fototry ny tetikasa. Eny, tsy hitan'ny kandida sasany hoe nahoana no ilaina ny mameno ny andiam-panontaniana anjotra sy mampahafantatra ny fijerin'izy ireo amin'ny fomba mangarahara.
Fanamby iray hafa koa ny fampahafantarana ny sehatra eo anivon’ny mpifidy: Ahoana no hahatrarana ireo zokiolona mpifidy? Ahoana no ahafahana manao doka any amin'ny firenena samihafa? Ny ampahany betsaka amin'ireo Tibetana am-pielezana dia miaina ao anaty fepetra tsotra any amin'ireo tanàna any India sy Nepal izay ratsy ny fotodrafitrasa, na, toy ny any Nepal, tsapa ny sivana lava ataon'i Shina.
Mampiseho ny fetra sy ny mety hampidi-doza amin'ny fitaovam-pifidianana anjotra toy izany ihany koa ny fampiharana ny smartvote ao amin'ny tokotanin-tsehatra vaovao. Tsy ahafahana manome valiny amin'ny antsipiriany ireo fanontaniana voalasitra fatratra sy notsorina tanteraka. Noho izany, tsy maintsy mahafantatra ny hirika sy ny loza mety hitranga amin'ny Fampiharana Toro-hevitra momba ny Fifidianana na ny mpamatsy na ny mpisera.
Asa amperiny ho fandraisana anjara amin'ny demaokrasia tanora
Na dia teo aza ny fanamby maro, mampiseho vokatra mahaliana ny andrana: ho an'ny fifidianana savaranonando tamin'ny volana janoary, manodidina ny antsasa-manilan'ny kandidà no nanangana horirantava smartvote. Olona 80.000 eo ho eo no nisoratra anarana ho amin'ny fifidianana, efa nanome tolo-kevitra momba ny fifidianana mihoatra ny 7400 ny fitaovana tamin'ny 7 aprily.
Noresahan'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Tibetana an-tsesitany tao amin'ny media sosialy ihany koa ny fampiharana:
Find candidates that share your opinions! https://t.co/qRydZ2jZyq via @smartvoteTibet
Mitadiava kandidà mitovy hevitra aminao!
Fiarahabana indrindra ho an'ny Tetikasa Demaokrasia!
Raha lazaina izany, dia mampiseho fitongilanana amin'ny fandraisana anjara amin'ireo Tibetana monina any Andrefana ny fanombanana voalohany, angamba noho ny fidirana aterineto tsotra kokoa. Mbola aloha loatra ny hijerena hoe hatraiza ny fampiasana ny smartvote Tibet raha tena mety hampitombo ny fahafantarana ny fijerin'ireo kandidà sy hampitombo ny fahavononana handeha any amin'ny birao fandatsaham-bato. Saingy ny mazava dia mitondra fijery vaovao momba ny sehatry ny fikarohana momba ny fifidianana, ny demaokrasia, ny zanaka ampielezana ary ny VAA ity tetikasa ity. Ankoatra izany, dia manampy amin'ny fifanakalozan-kevitra mavitrika, mifototra amin'ny zava-misy eo anivon'ny vondrom-piarahamonina Tibetana an-tsesitany izany.
FANAMARIHANA: Sonam Palmo Brunner, mpanoratra sy Dechen Pemba, izay nanampy tamin'ny fandikana avy amin'ny teny Alemà tany am-boalohany ho amin'ny teny anglisy, dia samy mpikambana ao amin'ny ekipa smartvote Tibet. Tsy misy na iray aza amin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipa smartvote Tibet mirotsaka ho kandidà amin'ny fifidianana Tibetana.